Ungazikhipha kanjani izithombe kumavidiyo aku-YouTube: Zonke izinketho | Izindaba zamagajethi
Lokhu kwenzeke kuwe ngezikhathi ezithile. Ubuke ividiyo ku-YouTube futhi kunomzuzwana noma isigcawu osithandayo, futhi ungathanda yini ukuba nesithombe saleso senzakalo. Uma uthatha isithombe-skrini kukhompyutha yakho, kungenzeka ukuthi ikhwalithi ayiyona engcono kunazo zonke noma ukuthi awuyitholi indawo eqondile. Ngenhlanhla, kukhona amathuluzi enza lokhu kwenzeke.
Ngale ndlela, singakwazi khipha ifreyimu noma isithombe kuvidiyo eshiwo esikubonayo ku-YouTube. Lokhu kuyinto elula sibonga amathuluzi esiwathola namuhla kulo mkhakha. Singakwenza sisebenzisa amakhasi ewebhu ahlukahlukene, azosivumela ukuthi sikhiphe isithombe esishiwo kunoma iyiphi ividiyo kuwebhu.
Sikushiya ngezansi ngochungechunge lwamakhasi ewebhu noma amathuluzi lokho zingaba usizo kulokhu. Bazokuvumela ukuthi ukhiphe isithombe kumavidiyo ashiwo kuwebhusayithi edumile. Ukuze ube nalesi sithombe esikuthandayo kukhompyutha yakho ngendlela elula. Yikuphi okukhethwa kukho esikutholayo namuhla?
Ungawabuka kanjani amavidiyo we-YouTube ungaxhunyiwe ku-inthanethi
1 Isithombe-skrini se-YouTube
2 Cisha Izibani
3 Thola isithonjana sevidiyo ye-YouTube
5 Buka Uzimele ngozimele
Uma esikhundleni sekhasi lewebhu, ungakhathazeki ngokusebenzisa isandiso, lokhu kuyindlela enhle ongayibheka. Isandiso esingasifaka kuGoogle Chrome, esizosinika ithuba lokuthi khipha izithombe kumavidiyo e-YouTube. Izithombe ozozikhipha zisefomethi ye-PNG ngaso sonke isikhathi.
Uma ifakiwe, inkinobho izovela phezulu ngakwesokudla kwesiphequluli. Ngakho-ke, lapho sivula ividiyo kuwebhu, lapho sifuna ukukhipha khona isithombe, sinezinkinobho eziningana kuso. Singachofoza ku-Screenshot inkinobho ukukhipha leso sithombe. Ngaphezu kwalokho, ukwenza inqubo ibe lula, singasheshisa isivinini sokudlala, ikakhulukazi uma kuyividiyo ende kakhulu futhi sifuna umzuzu othize.
Ithuluzi elisebenziseka kalula, ngaphandle kokukhululeka futhi ukwazi ukuyisebenzisa nganoma yisiphi isikhathi ngamavidiyo we-YouTube. Kuyalandwa kulesi sixhumanisi esipheqululini.
Lesi esinye isandiso esingasisebenzisa kuGoogle Chrome nakwezinye iziphequluli eziningi. Inhloso enkulu yawo ukufiphalisa sonke isikrini lapho sidlala ividiyo ku-YouTube, noma futhi inochungechunge lwemisebenzi eyengeziwe etholakalayo. Phakathi kwabo sithola ifayela le- kungenzeka ukukhipha izithombe kulawa mavidiyo esiwabukayo. Ngakho-ke futhi kufeza nomsebenzi ebesikade ukufuna kuleli cala.
Lesi sandiso sifakwe kusiphequluli futhi isithonjana sizoboniswa ngaphezulu ngakwesokudla. Okulandelayo, sichofoza kwesokudla kusithonjana esishiwoyo bese sifaka izinketho bese kuthi izinketho eziphambili. Ngaphakathi lapho sisebenzisa inketho yebha yamathuluzi evidiyo, ukuze sibe nethuba lokukhipha izithombe ezishiwo kumavidiyo e-YouTube.
Lapho sibuka ividiyo ku-YouTube, lapho sibeka igundane phezu kwale vidiyo, kuzovela izinketho eziningi. Enye yazo isithonjana esisefomini yekhamera yezithombe. Lesi yisithonjana okufanele uchofoze kuso ukuze wenze lo msebenzi ukukhipha izithombe. Ngokuchofoza kuso, isithombe sithi sikhishwa ngaso sonke isikhathi. Isandiso esinamathuba amaningi, kepha kulula ukusisebenzisa, kanye nokusebenzisana nazo zonke izinhlobo zeziphequluli. Ungakwazi landa kusuka kuwebhusayithi yabo.
Ungawalanda kanjani amavidiyo we-YouTube ngaphandle kwezinhlelo
Thola isithonjana sevidiyo ye-YouTube
Leli yikhasi lewebhu esingalisebenzisa kunoma iyiphi idivayisi, ngoba konke okumele ukwenze faka lesi sixhumanisi. Ukusebenza kwayo kulula impela kuleli cala. Kuwebhu kufanele faka i-URL yevidiyo okukhulunywa ngayo evela ku-YouTube. Lapho i-URL ifakiwe, kuzoboniswa isithombe sekhava sevidiyo eshiwo, okuyikho esivumela ukuthi sikuthole kuleli cala. Ngakho-ke singagcina leso sithombe manje.
Le inketho elula, kepha inomkhawulo ocacile, ngoba isivumela ukuthi sithole kuphela leso "simbozo" sesithombe of wathi ividiyo. Yize kuwusizo emcimbini ukuthi kunabantu abafuna ukuthola lowo mfanekiso, kunezikhathi lapho ungabonakali kamuva kuvidiyo uqobo. Ngakho-ke le webhusayithi ikuvumela ukuthi uyifinyelele ngendlela elula impela.
Kepha uma ubufuna indlela yokwenza thola leso sithombe kusuka kumavidiyo aku-YouTube, le webhusayithi ngokungangabazeki inketho engcono kakhulu kuyo. Kulula ukuyisebenzisa, kuthatha isikhathi esincane futhi singagcina isithombe kwikhompyutha ngqo, sisivumele ukuthi sihlele kamuva noma sisigcine noma sisilayishe kuwebhusayithi uma sifuna.
Le webhusayithi ihloselwe ukuguqula ividiyo ibe ngamanye amafomethi, njengakwi-GIF, ngokwesibonelo. Kepha sithola uchungechunge lwemisebenzi eyengeziwe, esivumela ukuthi sikhiphe isithombe kuvidiyo ye-YouTube eshiwoyo, ukuze sikwazi ukuyisebenzisa ngaso sonke isikhathi.
Njengoba phakathi kwemisebenzi yayo ukukhipha ifreyimu noma ifreyimu kwividiyo eshiwo. Ngakho-ke, uma ubufuna ukukhipha umzuzu othile kuvidiyo eshiwo, ungasebenzisa leli thuluzi kunoma yikuphi, ukuthola indawo eshiwo. Indlela yokukwenza ilula. Silayisha ividiyo noma sibeka isixhumanisi se-YouTube kuwebhusayithi yakho nakuwe siguqula njenge-JPG. Umugqa wokudlala wevidiyo uzovela lapho, lapho kufanele sikhethe kuphela ifreyimu esiyifunayo.
Ngale ndlela singasithola lesi sithombe kuvidiyo ye-YouTube ngendlela elula. Akuthathi isikhathi eside futhi kulula ukuyisebenzisa. Ungasebenzisa lo mhleli kuwebhusayithi yakho ngqo, kulesi sixhumanisi.
Iyini imodi ye-YouTube incognito ku-Android nokuthi ungayisebenzisa kanjani
Buka Uzimele ngozimele
Le nketho yokugcina yiwebhusayithi ehlose ukuthi sikwazi ukubona ividiyo kuwebhusayithi edumile ukuze onke amafreyimu alo ayabonakala. Kepha lokhu kusivumela ukuthi sikhiphe isithombe okukhulunywa ngaso esisithandayo kwividiyo eshiwo, futhi ngaleyo ndlela sibe nesithombe okukhulunywa ngaso. Ngakho-ke kuyindlela elula yokusebenzisa.
Isebenza nganoma iyiphi ividiyo ye-YouTube, kufanele nje sifake i-URL yayo kuwebhu, kulesi sixhumanisi. Ngemuva kwalokho kuzokhonjiswa wonke amafreyimu evidiyo futhi sizokwazi ukukhipha leyo esiyithandayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izifundiswa » Ungazikhipha kanjani izithombe kumavidiyo aku-YouTube
UKobo Libra H2O, umjikelezi wama-eReaders ozofunda ngawo lapho uya khona